Economic Views from Zimbabwe: Virgin Unite, Humanity United and the Nduna Foundation announce plans to help restore Zimbabwe to a thriving nation.
Posted by Odette H Lind at 9:27 AM
Hats off to Richard Branson and his charity organisation for venturing out to invest in Zimbabwe.
Zimbabwe is rich in natural beauty and has excellent agricultural potential and abundant mineral wealth.
The Zimbabwean people are freindly, hard working patient and kind.
The majority of Zimbabweans are Christians and they believe in God and put their trust in Jehovah Jireh. POSTED BY ERROL SMYTHE .
The proposed US $7 billion railway line linking Botswana , Zimbabwe and Mozambique will have a ripple effect on downstream economies in the SADCC Region.
Zimbabwe gold production may quadruple in the next four to five years once plans to upgrade the Electricity supply are realised.